Fivavahan-drazana afrikana - Wikipedia
Fitsinjaràn' ny karazam-pivavahana aty Afrika: Kristiana - Miozolmana - Animista
Ny fivavahan-drazana afrikana dia fivavahana nentim-paharazana izay maro aty Afrika sy any amin' ny tany hafa, izay nolovan' ny Afrikana monina aty atsimon' i Sahara tamin' ireo razany tany aloha, fa tsy nampidirina avy any ivelany toy ny fivavahana kristiana sy ny fivavahana silamo, ohatra. Mampianatra ny fisian' ny fanahy sy ny andriamanitra ary ny hery hafa isan-karazany ireo fivavahana ireo, metetika ny mpanaraka azy dia mivavaka amin' ny fanahin' ny razana sady mino ny fisian' ny andriamanitra faratampony sady mpamorona. Miovaova arakaraka ny kolontsaina isam-paritra aty Afrika ny endrik' izany fivavahan-drazana izany.
Amin' ny ankapobeny, ny fampianaran' ireo fivavahana ireo dia tsy voasoratra fa miampita amin' ny alalan' ny lovantsofina am-bava. Inoana ao amin' ireo fivavahana ireo ny fisian' ny andriamanitra ambony sy ny andriamanitra ambany, matetika dia inoana ny fisian' ny Andriamanitra faratampony sady mpamorona. Mifangaro amin' ny fitsaboana nentim-paharazana koa izany fivavahana izany. Misy amin' ireo fivavahana ireo no azo lazaina ho manana endrika animista (mino fa ny zavatra sasantsasany toy ny vato sy ny hazo sy ny biby sns dia mety manana fanahy), ny sasany ho pôliteista (mino ny fisian' ny andriamanitra maro), ny sasany ho panteista (mino fa ny zavatra rehetra dia samy manana ampahan' ny maha andriamanitra). Ao koa ireo fivavahana izay mino ny fisian' ny Andriamanitra tokana faratampony (miova arakaraka ny faritra sy ny firenena ny anarany: Chukwu, Nyame, Olodumare, Ngai, Roog, sns. Ny sasany mino ny fisian' ny andriamanitra roa izay lahy sy vavy (doalista) (ohatra: Mawu-Lisa).
Ny finoana ny fisian' ny fiainana aorian' ny fahafatesana sy ny fisian' ny tontolon' ny fanahy ary ny fivavahana amin' ny razana dia isan' ireo singa fototra mamaritra ny fivavahan-drazana afrikana. Ny fivavahan-drazana afrikana sasany dia niharan' ny akon' ny fivavahana silamo sy ny hindoisma.
Matetika ny mpandala ny fivavahan-drazana afrikana dia mitsipaka ny filazana fa animisma, paganisma na fetisisma ny fivavahany. Ny fampitahan' ny mpanoratra eorôpeana ny fivavahana afrikana amin' ny fivavahana abrahamika, indrindra ny kristianisma sy ny fivavahana silamo, ho môdely fenon' ny atao hoe "fivavahana", no heverina fa nahatonga izany. Hita koa ny fivavahana izay tsy miorina amin' ny fisian' ny andriamanitra sady tsy mahalala izany (fivavahana tsy misy andriamanitra).
Miparitaka any ivelan' i Afrika ny fivavahan-drazana afrikana, indrindra any Amerika. Ahitana azy ireo koa ny any Eorôpa. Izany fielezany izany dia vokatry ny fanandevozana sy ny fivarotana andevo fahiny tamin' ny tany manodidina ny Ranomasimbe Atlantika: indrindra any Brezila, any Kiobà, any Haitỳ, any Amerika Avaratra, any Jamaika ary any Trinidada.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahan-drazana_afrikana&oldid=1040317"
Voaova farany tamin'ny 24 Novambra 2021 amin'ny 14:49 ity pejy ity.